112 – Lambarkan waxaa la isticmaalaa xilliga xaalado deg-deg ah marka ay jirto khatar ah nafta ama deegaanka.
113 13 – Lambar waxaa la isticmaalaa si loo helo ama loo gudbiyo macluumaadka ku saabsan shilal khatar ah iyo xaalado dhibaato.
114 14 – Lambarkan waxaa loo isticmaalaa la xiriirka booliiska ee ku saabsan dembiyada aan deg-deg ahayn iyo wargelinta, macluumaad dhiibida iyo warbixinaha.
1177 – Lambarkan waxaa la isticmaalaa si loo helo talo bixinta daryeelka bukaanka iyo tilmaamida dhinaca daryeelka caafimaadka oo lagu bixiyo telafoonka.
112- Hawshan waxaa lagu soo diyaariyay wada shaqayn u dhaxaysa qaylo dhaanta SOS iyo booliiska
Hore u sii soco
Qofkee ayaa waxa ugu badan
ka og lambarkayaga?
Sannad kastaba qaylo dhaanta SOS waxay ka jawaabtaa saddex milyan oo telafoon oo soo mara lambarka deg-dega 112. Qiyaastii hal milyan oo ka mid ah telafoonadan soo dhacaa waa qalad – wax kasta way yihiin laga bilaabo wicitaan ciyaar ah ilaa telafoon ay ahayd inuu u gudbo mid ka mid ah lambarada kale ee bulshada. Miyaad adigu garanaysaa lambarka ay tahay inaad wacdo marka ay wax dhaceen?
Hadba sida ugu dhakhso badan ee aad ugu jawaabto si sax ah waxaa sii fiicnaanaysa natiijada aad adigu helayso. Nasiib fiican!
Lambarkan waxaa la isticmaalaa xilliga xaalado deg-deg ah marka ay jirto khatar ah nafta ama deegaanka.
Lambar waxaa la isticmaalaa si loo helo ama loo gudbiyo macluumaadka ku saabsan shilal khatar ah iyo xaalado dhibaato.
Lambarkan waxaa loo isticmaalaa la xiriirka booliiska ee ku saabsan dembiyada aan deg-deg ahayn iyo wargelinta, macluumaad dhiibida iyo warbixinaha.
Lambarkan waxaa la isticmaalaa si loo helo talo bixinta daryeelka bukaanka iyo tilmaamida dhinaca daryeelka caafimaadka oo lagu bixiyo telafoonka.
Su'aasha 1 aad ee 10
Saacadu waa habeen bar oo halka hoose ee tareenadu maraan ayaad ku aragtay koox badan oo isla markaas dagaalamaya. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Su'aasha ku xigta
Jawaab khalad ah.
Jawaab sax ah.
Adiga oo booqanaya suuqa dukaamada ayaad buuqa dadka ka dhex maqashay quraarad la jebiyay oo waxaad aragtay saddex qof oo wejigooda qariyay oo ka sii cararaya dukaan iibiya saacadaha. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Ilmahaagi sannad-jirka ahaa ayaa leh xummad. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Adiga waxaa jirka kaa soo baxay finan guduud ah kuwaas oo ku cun-cunaya oo wax yar ayaad wel-welsantahay. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Anigu waan hubaa inaan baaskiilkaygi cusbaa ee korontada ku shaqaynayay ku qufulay bakhaarka shaqada, laakiin iminka waa la xaday. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Waa maalin jimce ah. Adiga iyo dhowr saaxiibadaa ah ayaa wakhti fiican ku wada qaadanaya jibis iyo looska. Adiga saaxiibkaa ayaa si kedis ah ay ugu adkaatay inuu neefsado iyadoo ay sabab u tahay looska. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Adigu waxaad socod ku ag maraysaa meesha baabuurta la dhigto oo waxaad arkaysaa baabuur gubanaya. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Adigu waxaad ogaatay in boorsadaadi yarayd ee lacagta ee markii ugu dambeysay kuugu jirtay boorsada markaad saarnayd baska in lagaa xaday. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Adigu waxaad ka kacday hurdo oo waxaad arkaysaa in xilligii habeenimada aad wax buuran ku yeelatay cunaha laakiin tani ma laha xanuun. Si aad u hubsato waxaad doonaysaa inaad ogaato waxa tani noqon karto. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Tuugo ayaa lagu jabsaday dukaan ku yaala halka aad degantahay oo adigu waxaad arkaysay waxyaabo aad doonayso inaad u sheegto booliiska. Lambarkee ayaad wacaysaa?
Hawl geli saaxiib
La wadaag dad kale dhinaca Facebook
La wadaag dad kale dhinaca email-ka
Waa kuwan jawaabaha saxda ah
Dib u samee imtixaankan